Accueil > Gazetin'ny nosy > Zotram-pifidianana : Himasoana ny hampanjakana ny mangarahara
Zotram-pifidianana : Himasoana ny hampanjakana ny mangarahara
Iombonan’ ny mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara, toa ny Vondrona Eraopeana amin’ny alalan’ny « Centre Europeen d’appui electoral » (ECES) na ivon-toerana eraopeana ho amin’ny fanohanana ny raharaham-pifidianana, izay manana ny solontena maharitra eto Madagasikara, dia ny Dr Eva Palmas, ny hampanjaka ny fifidianana madio sy mangarahara anaty filaminana mirindra ary an-katoavin’ny rehetra. Tonga nitsidika tamin’ny fomba fifanajana sady niarahaba amin’ny fiantsorohana ny asan’ ny filohan’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana, Dama Andrianarisedo, omaly alarobia ity solontena’ny ECES ity. Hanohy ny fiaraha-miasan’ny Vondrona Eraopena izay efa niatomboka tamin’ny taona 2013 ka hanamafy izany no anton-diany araka ny lahateny izany nataony. Tsy mpikarakara na mpanomana ny fifidianana izay hatao eto Madagasikara amin’ny taona 2023 izahay, hoy Rtoa Eva Palmas, fa ho mpiara-miombon’antoka hifanampy amin’ny Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana . Ny tanjon’ny rehetra dia ny mba hankatoavan’ny olompirenana tsirairay ny fifidianana ka hanjaka ny filaminana sy fandriampahalemana, hoy izy.
Teboka roa lehibe kosa no nasongadin’ny filohan’ny Ceni Malagasy, Dama Andrianarisedo, tamin’ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika. Eo ny ho endriky ny fiaraha-miombon’antoka amin’ny alalan’ny traik’efa ananan’izy ireo amin’ny zotram-pifidianana hatrizay. Hijery paik’ady toy ny fahaiza-manao amin’ny fampivoarana ny rindran-damina ka ahafahana mifanakalo hevitra amin’ny fanabezana eo amin’ny sehatry ny fifidianana. Ankilany, hifanolo-tanana amin’ny hampandraisan’anjara ireo ratsa-mangaika hatrany ifotony amin’ny alalan’ny fanofanana ny mpisehatra rehetra.
Samy niombon-kevitra ny hampanjaka ny fifidianana madio sy mangarahara anatin’ny filaminana sy ny fandriampahalemana ny andaniny sy ny ankilany, omaly. Manaraka izany , vonona ihany koa na ny mpiara-miombon’antoka na ny ao amin’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana ny hifanome tanana amin’ny firosoana amin’ny fanavaozana ny lisi-pifidianana. Io fanavaozana ny lisi-pifidianana io izay mizotra ara-dalàna araka ny nambaran’ny filohan’ny Ceni. Andrianarisedo Dama.